राजनीति » Home
‘केही दिनमै नयाँ सरकार, चुनावमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी’
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही दिनमै नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् । साथै उनले आगामी चुनावमा दलहरुसँग मोर्चा बनाएर केपी शर्मा ओलीलाई चौथो पार्टी बनाउने बताए । माओवादी केन्द्रको कर्णाली प्रदेश सम्पर्क समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर.....
बैजनाथमा माओवादी केन्द्रको संगठन बिस्तार
बाँकेको बैजनाथमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कमिटी बिस्तारलाई तिब्रता दिएको छ । पार्टीको एक महिने सम्वन्ध सुदृढिकरण तथा जनसम्वन्ध बिस्तार अभियान अन्तर्गत बिहबारदेखी पालिकाअन्तर्गतका हरेक वडामा कमिटी विस्तार कार्यले तिब्रता पाएको छ । अभियानको दोस्रो दिन बैजनाथ गाउँपालिका वार्ड नं. ४ मा आकाश सन्ज्यालको.....
बैजनाथमा माओवादीको जागरण अभियान सुरु
नेकपा माओवादी केन्द्रले बाँकेको बैजनाथमा एक महिने सम्वन्ध सुदृढिकरण तथा जनसम्वन्ध बिस्तार अभियान सुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्र बाँकेको बिस्तारित बैठकले जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रमा एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार बिहिबारबाट बैजनाथमा समेत अभियान सुरु गरीएको नेकपा.....
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले कमिटि बिस्तार अभियानलाई तिब्रता दिएको छ । माओवादी केन्द्र कोहलपुर नगर समितिद्वारा संचालित १ महिने 'संगठन सुदृढीकरण तथा जनसम्बन्ध बिस्तार' अभियान अन्तर्गत टोल-टोलमा कमिटि बिस्तार गर्न सुरु गरीएको छ । अभियानको दोस्रो दिन बिहिबार कोहलपुर ८, ९ र १० नं. वडामा कमिटि.....
नेकपा माओवादी केन्द्रले कोहलपुरमा एक महिने सम्वन्ध सुदृढिकरण तथा जनसम्वन्ध बिस्तार अभियान सुरु गरेको छ । माओवादी केन्द्रको चैत्र १३ गते बसेको बिस्तारित बैठकले कोहलपुर क्षेत्रमा एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअन्तर्गत बुधबारबाट अभियान सुरु गरीएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता.....
लुम्बिनी प्रदेशसभाको ७ औं अधिवेशन आजदेखी
लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ । आज दिउँसो १ बैठक बस्ने बैठकमा दुई वटा विधेयक पेश हुने छन्। बैठकमा शुभकामना मन्तव्यपछि २ वटा विधेयकका प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले बताए । उनले आजको बैठकमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण सम्बन्धि.....